SSD किंग्स्टन V300: विशेषताहरु समीक्षा र समीक्षा
ठोस-राज्य पछि SSD-ड्राइव को मनोवैज्ञानिक बाधा हटाउन र बजेट खण्ड मा व्यापार वर्ग देखि सरेको छ, धेरै प्रयोगकर्ताहरू, विज्ञापन निम्न, उच्च-टेक उपकरण तपाईंको कम्प्युटरको लागि किन्न hurried। मिडिया, र तथ्याङ्क देखाउन रूपमा, सकारात्मक सुविधाहरू सबैभन्दा योग्य किंग्स्टन V300 ड्राइव लाभ को मालिक र ठोस-राज्य ड्राइव को बेफाइदा, सन्दर्भमा समीक्षा धेरै।
यस लेखमा पाठक, बिक्री मा नेता संग भेट्न सिक्न र यसको विशेषताहरु परिमार्जन मौका दिइएको छ। टिप्पणी र समीक्षा सम्भावित खरिदकर्ता सकेसम्म मात्र सही विकल्प छैन मदत र समय सम्पूर्ण प्रणाली को उत्पादकत्व जुटाउने मा सक्षम एक नयाँ उपकरण को अधिग्रहण मा निर्णय गर्नेछ।
संसारमा कुनै कम्पनी किंग्स्टन निर्माता लागि बाहेक, ठोस-राज्य ड्राइव (फ्लैश, DDR, नंद) को उत्पादन मा पेटेंट र नवाचारै को एक विशाल संख्या घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। टेक उद्यम पक्कै भण्डारण मिडिया को निर्माण मा विशेषज्ञहरु छन्। यो वास्तवमा चिरपरिचित ब्रान्ड प्राथमिकता दिन धेरै संभावित खरीदारों प्रोत्साहन दिन्छ।
निर्माता एक उत्पादन किंग्स्टन SSDNow V300 जारी भएपछि, कम्पनी विश्व बजार मा एक विश्वसनीयता स्थापित भएको छ। SSDs धेरै निर्माताहरु पनि प्रमुख उपकरण (हामी निकटतम शून्य गोलाई गरेर मात्रा सूचकांक कम बारेमा कुरा गर्दै छन्) गर्न समायोजन गर्न थालेका छन्।
«वी» - प्रतिशोध
आफ्नो ठोस-राज्य यन्त्रको लागि प्रदान गर्न माउन्ट र सफ्टवेयर पनि किंग्स्टन को पर्खालहरु मा आउन को लागि हो। तर, निर्माता किरा सुनिश्चित गर्न एक निश्चित प्रणाली शुरू गरेका छन्। त्यसैले, सबै कम लागत उपकरणहरू सस्तो ग्रेड स्थापना र विधानसभा लागि रकम प्राप्त, र अधिक महंगा ड्राइव आपूर्ति OEM फारम कारक। यो बजार मा महंगा हार्ड ड्राइव को लागत कम गर्न गरिन्छ।
हार्ड ड्राइभ SSD 120GB किंग्स्टन V300 स्थापित गर्न सकिन्छ मात्र होइन ल्यापटप मा। ड्राइभ समावेश 3.5-dyuyvovy बे सिस्टम एकाइ, मा माउन्ट विशेष स्लाइड छन् र SATA केबल र शक्ति जडान गर्न एक एडप्टर। एक हार्ड ड्राइभ संग बक्स मा पूर्ण आनन्द प्रयोगकर्ताको लागि स्लेज एउटा हार्ड ड्राइभमा संलग्न लागि स्क्रू को पर्याप्त सेट, र ती, बारी मा, प्रणाली एकाइ टोकरी गर्न छैन।
हार्ड ड्राइभ को भित्री संसार
यो स्क्रू मा भाँचिएको छाप लगािन्छ कम्तिमा गर्दा, SSD निर्माता खोल्न अत्यधिक सिफारिस छ, ग्यारेन्टी को हानि छैन बचा गर्न सकिन्छ। तर, समीक्षाको लागि निर्माता को निष्ठा, उत्साही जोखिम लिएर सुनिश्चित गर्न। धातु-प्लास्टिक बक्स समावेश छापिएको सर्किट बोर्ड, नियन्त्रक र स्मृति मोड्युलहरू। किंग्स्टन SSDNow V300 मा डाटा श्रृंखला लागि चिप प्रसिद्ध कारखाना चिप मा बनेको छ - SandForce। र यो श्रृंखला (60, 120 र 240 गिगाबाइट) को सबै परिमार्जनहरू लागू हुन्छ।
एक उन्नत परिमार्जन मा HyperX उतेजना नियन्त्रक भन्दा श्रृंखला «वी» राम्रो प्रदर्शन देखाउनुहुन्छ जो "Toshiba" प्रयोग गर्दछ। समीक्षा प्रक्रिया मा, बजार को अन्य प्रतिनिधिहरूलाई शरीर केलाउँदा, तिनीहरूले एक सुविधा पत्ता - विभिन्न ब्रान्डहरु नै स्मृति नियन्त्रक भेट गरेका छन्।
SSD-ड्राइभ किंग्स्टन V300 2.5 इन्च को फारम कारक छ र प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको छ SATA इन्टरफेस III। SATA द्वितीय अनुकूलता, तर डाटा स्थानान्तरण दर लागि हार्डवेयर समर्थन सीमित ब्यान्डविथ पैतृक इन्टरफेस छ। यो सैद्धान्तिक अधिकतम डाटा दर6Gbit / को (प्रति सेकेन्ड 768 मेगाबाइट) छ। गति पढ्न र प्रति सेकेन्ड वरिपरि 450 मेगाबाइट मा औसत छ SATA III इन्टरफेस लागि गति लेख्नुहोस्।
वाहक शक्ति खपत प्रति घण्टा 1.5-2 वाट र हार्ड ड्राइभ गतिविधि सिधै निर्भर छ। किंग्स्टन V300 जीवनको औसत अवधि 1 लाख घण्टा छ। भण्डारण वातावरण को सञ्चालन तापमान, र नाघ्नु हुँदैन 65 डिग्री सेल्सियस। उहाँले कुनै घुमाउँदा घटक छ किनभने कम्पन को मामला मा ठोस-राज्य ड्राइव लागि विशेष आवश्यकताहरु छैन, छैन।
प्रयोगकर्ताहरूको लागि पासो
त्यो ईन्जिनियरिङ् डाटा भण्डारण SSD किंग्स्टन V300, धेरै कम्प्युटर मालिक सोधपुछ छन्। बजार मा उच्च प्रविधी उपकरण खरिद र एक पीसी वा ल्यापटप यसलाई सेट गरेर, प्रयोगकर्ताहरूले पढ्ने र लेख्ने गति मा परीक्षण गर्न हतार। तथापि, प्राप्त प्रयोगात्मक परिणाम छैन त्यसैले गुलाबी, निर्माता द्वारा प्रतिज्ञा रूपमा छन्। तर दोष सामान्यतया अप्रचलित कम्प्युटर मालिक छ।
SATA इन्टरफेस। सबै दावी भण्डारण विशेषताहरु प्रविधिलाई को तेस्रो संशोधन गर्न सान्दर्भिक छन्, क्रमशः, ड्राइभ गति इन्टरफेस ब्यान्डविथ मा निर्भर गर्दछ।
AHCI मोड। आधुनिक motherboards को किंग्स्टन V300 शृंखला निर्धारण गर्न सक्षम छन् र उपयुक्त सञ्चालन मोड समावेश गर्नुहोस्। पुरानो उपकरणहरूमा प्रयोगकर्ता, (को BIOS मा) स्वयं यो के छ भने यो सबै त्यहाँ छ।
राम को सानो राशि। यो जंगल गर्न राखन गर्दा, स्मृति को2जीबी, SSD ड्राइभ राख्न कुनै अर्थमा बनाउँछ। काम सङ्कुचित गरिनेछ multitask गर्न आवेदन काम राम छ।
पहिलो स्थानमा आवश्यक हार्ड ड्राइभमा किंग्स्टन V300 120GB को अधिग्रहण, ल्याप्टप मा एक चुम्बकीय हार्ड ड्राइभमा तल कदम भएकाहरूलाई। कम से कम को क्षेत्र मा पेशेवरों को सबै भन्दा आईटी-प्रविधिको कडा यो चरण लिन सिफारिस गरिएको छ। हामी आर्थिक 3500 rubles सम्म दायरामा मूल्य मा, हेर्नुहोस् को बिन्दुबाट मुद्दा दृष्टिकोण भने, खरीदार छानेको सीमित छ: एक 120GB SSD वा 1TB HDD। यो दुवै ड्राइव को मात्रा प्रत्येक अन्य 8 पटक फरक छ किनभने धेरै खरीददारों, outraged हुन् भनेर मान्छु गर्न तार्किक छ। तर, अन्य, उत्तिकै रोचक सुविधाहरू छन्:
डाटा स्थानान्तरण दर। को HDD ड्राइभ प्रति मिनेट (मानक ल्यापटप) 5400 क्रांतियों, किंग्स्टन V300 14 पटक छिटो मा सञ्चालन संग तुलना।
झटके प्रतिरोध। ल्यापटप उपकरण स्थिर छैन र स्थिर कदम यसलाई adversely कम्पन यसको भित्र विनाश चुम्बकीय डिस्क असर गर्छ।
प्रकाश वजन। गरौं 300 ग्राम विरुद्ध 80 ग्राम धेरै प्रयोगकर्ताहरू गर्न विशेष सजिलै देखिने छैन, तर यो अझै पनि एक लाभ छ।
को स्थापना संग कठिनाइ
को SSD किंग्स्टन V300 120GB मालिक मा काम सञ्चालन प्रणाली सार्न निर्देशन को सेट पक्कै पनि हार्ड ड्राइभ को स्थापना समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। तथापि, व्यवसायीक जगेडा को स्तरमा नीचे आना, र सफा स्लेट आफ्नो उपकरण प्रयोग गरेर सुरु गर्न सल्लाह। कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम (हामी Microsoft Windows उत्पादनहरु बारेमा कुरा गर्दै छन्) मिडिया प्रकार निर्धारण गर्न, र आफ्नो सिस्टम फाइलहरू सही नियुक्ति उहाँलाई एक निश्चित विभाजन तालिका बनाउन सक्षम छ।
स्वतन्त्र प्रयोगशालाहरुमा उत्साही द्वारा आयोजित परीक्षण स्क्राच देखि SSD accumulator मा सिस्टम स्थापना को प्रभावकारिता प्रमाणित। विन्डोज माइग्रेसन सफ्टवेयर लागि सफ्टवेयर को कुनै पनि नियन्त्रक पहिचान र सही विभाजन तालिका सिर्जना गर्न सकेन। कानुनी ब्रेक डिस्क र स्थानान्तरण प्रणाली फाइलहरू उल्लेख छैन।
परीक्षण देखि एक सभ्य डाटा प्राप्त गर्न सक्छन् एक शक्तिशाली गेमिङ कम्प्युटर कुनै पनि मालिक, तर के एकदम पुरानो मञ्चहरूमा लागि SSD किंग्स्टन V300 खरिद गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई बारेमा? यस मामला मा SSD प्रदर्शन कम्प्यूटर घटक को विशेषताहरु मा सम्पूर्ण निर्भर हुनेछ। मुख्यतया दक्षता गति र स्मृति क्षमता मा निर्भर गर्दछ। दोस्रो मापदण्ड प्रदर्शन प्रसंस्करण शक्ति चलाउनु छ।
टाढा जाने र भिडियो एडेप्टरको पुरानो मोडेल प्रयोग गर्ने खेलाडीहरूलाई छैन। ड्राइभ किंग्स्टन V300 प्रदर्शन-गहन गतिशील खिलौने 20% वृद्धि गर्न सक्छन् र माथि (यो ग्राफिक्स कार्ड र सीपीयू परिमार्जन मा निर्भर गर्दछ)। कुनै पनि मामला मा, प्रदर्शन देख्न सकिन्छ प्रोग्राम मा स्तर संख्या मा, तर पनि व्यापार आवेदन र खेल मा आफ्नै आँखाले मात्र होइन।
यो SSD गर्न कठिन चुम्बकीय डिस्क प्रतिस्थापन गर्न आउँदा, धेरै सम्भावित खरीदार आधारहीन तर्क पछि लुकाउन प्रयास गर्दै यो कम स्मृति संग एक धेरै महंगा उपकरण छ कि। आखिर, यो 120 जीबी क्षमता भन्दा 1 टीबी खरिद गर्न थप तार्किक छ। सबै मल्टिमिडिया सामाग्री (संगीत र चलचित्र) को रूपमा, छ केवल कुनै एक जो यो एक यस्तो स्रोत लागि उद्देश्य सफाइ गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोगकर्ताहरूको 99% आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड बिना अनलाइन प्रयोग गर्नुहोस्।
तर यो गति र डाटा भण्डारण विश्वसनीयता, हार्ड ड्राइभ किंग्स्टन V300 को पक्षमा सबै तर्क आउँदा। उपकरणको अवलोकन र यसको विनिर्देशों फेरि कठोर चुम्बकीय भण्डारणको युग अन्त गर्न आए भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ छन्। यसलाई जो भविष्यको लागि, उच्च-टेक उपकरणहरू लगानी गर्न समय।
कम्प्युटर प्रोसेसर को मुख्य विशेषताहरु
ग्राफिक्स ट्याबलेट। काम र रेखाचित्र दुवै लागि एक सार्वभौमिक उपकरणको लागि खोज मा
कम्प्युटरको लागि शान्त माउस: सर्वश्रेष्ठ मोडेल को समीक्षा
वक्ता EDIFIER S2000: सिंहावलोकन, वर्णन, कैरेक्टराइजेशन र समीक्षा
जोइस्टिक "Xbox 360"
अस्थि मज्जा को एक बायोप्सी कस्तो छ? प्रक्रिया उद्देश्य
कम्प्युटर र उत्पादन उपकरणहरू विकास
एक अपतटीय कम्पनी के हो र यसलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ? रूसी अपतटीय कम्पनीहरूको सूची
बेलुन "perplexus": को पहेली को विवरण
कार मा रेडियो क्यासेट प्लेयर, वा तपाईं के आवश्यक छ फेला पार्न कसरी
स्ट्रिमिङ - यो के हो? खेल शब्दावली को व्याख्या
एकीकरण: परिभाषा, प्रकार, चरणमा
प्रतिक्रिया कसरी लेख्न? कम्प्युटर गेम मा प्रतिक्रिया के छ?
इलेक्ट्रिक क्यालेले पोलारिस: मोडेल र ग्राहक समीक्षाहरू
Titanfall: सिस्टम आवश्यकताहरु, आफ्नो विचार र वास्तविकताहरु मेल